AR ၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုချွတ်ပယ်ခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » AR ၏ခြေချင်းဟာ Off လှုပ်
By ဖီးလ် Ventre, VP အားကစားနှင့်ထုတ်လွှင့်, Ncam
ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တိုးပွားအဖြစ်မှန်တစ်အတော်လေးအခြေတည်စအဆင့်တွင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ယင်း၏အသုံးပြုမှုနောက်ဆုံးတော့ကွာ gimmicky '' သစ်ကိုကစားစရာ '' စင်ပေါ်မှာကနေရွေ့လျားလျက်ရှိ၏ AR ဂရပ်ဖစ်ပရိုဂရမျအကြောင်းအရာအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြသဖြင့်, ခေတ်မီပရိသတ်တွေအပြည့်အဝအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ကြသည် Hyper-ကိုမှန်ကန်ယုံကြည်ဂရပ်ဖစ်တောင်းဆိုနေကြသည်။
အထူးသဖြင့်အဆိုပါအားကစားထုတ်လွှင့်ကဏ္ဍမှာ programming ကိုမြှင့်တင်ရန် AR ဂရပ်ဖစ်နှုတ်ဆက်ပြီးသိရသည်။ ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုမှာစိန်ခေါ်မှုအသစ်နှင့်အမြင်အာရုံဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများကိုထိုသို့သောအားကစားအချက်အလက်များနှင့်စာရင်းဇယားအဖြစ်ဂရပ်ဖစ်ကိုတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်; Ncam Reality နဲ့တူအမှတ်အသား-လျော့နည်းကင်မရာခြေရာခံခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူ, အခုသူတို့တစ်ဦးဂေါက်ကွင်းအပေါ်တစ်ဦးကစားသမားတစ်ဝှမ်းလမ်းလျှောက်ခံရဖို့ပေါ်လာဖို့စတူဒီယိုအတွက်တင်ပြ enable နိုင်ပြီး, ကွာမိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှဆုတင်ပြချက်များသို့နိုင်ပါတယ်တောင်မှ '' တယ်လီပို့ '' အားကစားသမား - အားလုံးနှင့်အတူ Hyper-လက်တွေ့ကျကျဂရပ်ဖစ်။
ကင်မရာကိုခြေရာခံခြင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်သောနောက်ဆုံးန့်အသတ်တစ်ခုမှာကြိုးမဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ AR ဖြေရှင်းချက်တစ်လံကြိုး cable ကိုကနေတဆင့်ပြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကို server ကိုမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒေတာနို့တိုက်ကျွေးမှုကင်မရာနှင့်အာရုံခံကိရိယာဘားရ၏ ဒီစတူဒီယိုအလုပ်နှင့်တစ်ဦး OB အပေါ် fixed ရာထူးများအတွက်ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်စဉ်ကပိုပြီးဖန်တီးမှုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တင်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်သော CBS အားကစားအဆိုပါ Super Bowl မှာအစေးအပေါ်တိုက်ရိုက်ဂရပ်ဖစ်ထားရန်စိတ်ကူးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုချဉ်းကပ်သောအခါ, စိန်ခေါ်မှုပြန်ထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားဖို့အစေးအပေါ်တစ်ဦး Steadicam တူးစင်ကနေ RF မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာခရီးသွားလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကစားသမားတွေမှ reactive အခမဲ့စီးဆင်းနေသောကင်မရာလှုပ်ရှားမှုများကိုအဘို့အခွင့်ပြုခြင်း, ကင်မရာစစ်ဆင်ရေးတက်လွတ်မြောက်ဖို့နည်းလမ်းရှာနိုင်ဖို့လိုတယ်။
ဒီဖြေရှင်းချက်ကပုံမှန်ပေမယ့်ထက်ကြီး Ncam server ကိုရန်ရေနံတူးစင်ချိတ်ဆက်ကာရယူခြင်းအဖြစ် Steadicam RF တူးစင်ဖို့အာရုံခံကိရိယာဘား mount ဖို့ဖြစ်တယ်, တစ်ဦး mini ကိုကွန်ပျူတာအစားထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာသည် Steadicam တူးစင်မှ tethering ကျန်သေးပေမဲ့သူက ပို. မိုဘိုင်းနှင့်အလွယ်တကူ Steadicam အော်ပရေတာနှင့်အတူရွှေ့နှင့်ပွဲချင်းပြီးဆော့ဖ်ဝဲ manipulate နိုင်သူလက်ထောက်များကပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ RF signal ကိုထို့နောက်ထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားမှကြိုးမဲ့ပြန်ပို့နိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်ကောင်းစွာဂိမ်းရှေ့တော်၌ထိုလယ်ကွင်း၏ဗဟိုသို့ပြေးခဲ့သည့်တွေကို RF Steadicam, CBS ကအားကစားမှာလည်းနှစ်ခုထပ်မံ Ncam AR tethering တူးစင်ချထားအဖြစ်: တစ်ကြိုး Steadicam သည့်အပေါ် positioned ခဲ့သည် GameDay ဝါသနာရှင်ပလာဇာ (ထို Mercedes-Benz အားကစားကွင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးပြင်ပတွင်စတူဒီယို), အခြားကြိုး Technojib လယ်ပြင်ပေါ်တွင်နေရာချထားခဲ့ပါတယ်နေစဉ်။ အားလုံးဂရပ်ဖစ်အနာဂတ် Group မှအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
ဝေးအတ္တလန်တာအတွက်တစ်ခုတည်းဖြစ်ရပ်ကျော်လွန်ဂယက်နှင့်အတူအရာအားလုံးကိုနေ့၌ဿုံအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အကြီးအအောငျမွငျခဲ့ - ကမ္ဘာတဝှမ်းသန်းနဲ့ချီတဲ့ကရှုမြင်တဲ့ကြီးမားသောဖြစ်ရပ်ဆိုသော်ငြား။
ထိုအချိန်မှစ. ကျနော်တို့ကသူတို့ကို AR နှင့်အတူပိုပြီးလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါရန်ဤနည်းပညာကိုမွမ်းမံဖို့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းပြမြေပုံမျှဝေအများအပြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတွေမှာ R & D အသင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါပြီ။ ဆာဗာကွန်ပျူတာတောင်မှသေးငယ်နှင့်ပိုပြီးပေါ့ပါးအောင်အသုံးပြုပုံကင်မရာအော်ပရေတာသည်ယခုအခါသူတို့ကိုလှုပ်ရှားမှု ပို. လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်း, ကသူတို့ကိုယ်သူတို့သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲနေရာချအမှတ်အသားများအပေါ်မှီခိုအားထားရှိခြင်းထက်ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝရမှတ်ကိုယူလိုက်တယ်အဖြစ်အပြင်, တစ်ဦးအမှတ်အသား-လျော့နည်းကင်မရာခြေရာခံခြင်းစနစ်, အိမ်တွင်းသို့မဟုတ်အိမ်ပြင်ဖြစ်စေ, ထုတ်လွှင့်လုံးဝနီးပါးမဆိုအာကာသအတွင်း AR သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အပြိုင်ခုနှစ်, 5G ၏ရရှိမှုအားကစားကိုအပ်သည်လမ်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ BT အားကစားဒီနည်းပညာအသစ်များ၏ရှေ့တန်းမှာဖြစ်ပြီး, အောင်မြင်စွာမကြာသေးမီလများအတွင်း 5G ကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုအားကစားဖြစ်ရပ်ကနေသိသိသာသာလျှော့ချအောင်းနေချိန်နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်ပါလိမ့်မည် - အသင်းဘတ်စ်ကား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ထိုရပ်တည်ချက်, အစေး၏ဗဟို - သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များပြောပြရန်ဒါရိုက်တာများအရင်ကထက်ပိုကြီးတဲ့ပတ္တူပေးခြင်း။
ထုတ်လုပ်မှုမှ untethered Real-time AR ဂရပ်ဖစ် Add နှင့်ထုတ်လွှင့်ရန်ယခုရရှိနိုင်သောဖန်တီးမှုလွတ်လပ်မှုကိုအံ့သြသည်။
အားကစားကဤနည်းပညာများများအတွက်အဓိကကားမောင်းသူဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သူတို့မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုလွှမ်းခြုံပါ (Swingometer 10 ဒေါင်းနင်းလမ်းအပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးစိတ်ကူး!) ကနေအဓိကအများပြည်သူထုတ်လွှင့်ရန်, မဆိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အကြိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
အမှတ်အသား-လျော့နည်း untethered တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကင်မရာခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူတိုးပွားအဖြစ်မှန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတံခါးဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကပိုထုတ်လွှင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်သောအရာကို၏အခွင့်အလမ်းများဘက်လျက်ကိုမြင်လျှင်လိမ့်မည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-06
ယခင်: pixel ပါဝါထပ်တိုး Pre-ရောင်းအားနှင့်စီမံကိန်းပေးပို့ခေါင်းဆောင်များနှင့် software များဖြေရှင်းချက်မှဖောက်သည်များအကူးအပြောင်းကိုကူညီပေးပါ
နောက်တစ်ခု: TSL ထုတ်ကုန်များသည် IBC 2019 ရှိ SAM-Q အသံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းအားနောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများကိုတင်ပြသည်